Xaaladda Koonfur Afrika oo ka sii dartay | KEYDMEDIA ONLINE
Xaaladda Koonfur Afrika oo ka sii dartay
Dibadbaxyadii ka dhashay xariggii Madaxweynihii hore ee Koofur Afrika Jacob Zuma, ayaa ku sii fiday gobollada Gauteng iyo KwaZulu-Natal, waxaana la soo sheegayaa khasaaro xooggan oo naf iyo maal leh.
JOHANNESBURG - Tirada dhimashada ayaa kor u dhaaftay 72 ruux, kadib markii rabshadihii ugu xoogganaa dhaceen Talaadadii, dadka ugu badan ayaana u geeriyooday is buurasho intii lagu guda jiray bililiqada dukaamada, booliska iyo militariga ayaa ridaya bambooyin iyo rasaas caag ah si ay isugu dayaan inay joojiyaan qalalaasaha ka dhashay xarigga Madaxweynihii hore Jacob Zuma.
Sida uu sheegay sargaalka booliska ah ee Maj. Gen. Mathapelo Peters, dhimashada ugu badan ayaa ka dhacday gobollada Gauteng iyo KwaZulu-Natal, kadib markii qaswadayaashu is buurteen intii ay ku guda jireen boobka badeecadaha kala duwan, sida; cuntada, qalabka korontada, khamriga iyo dharka dukaamada.
In ka badan kala bar dadka Koonfur Afrika ee 60-ka milyan ah, waxay ku nool yihiin faqri, heerka shaqo la’aanta waddanka waa 32%, sida lagu sheegay tirakoob rasmi ah, hoos u dhac dhaqaale oo dalka saameeyay oo sii kordhiyay gaajada ayaa rajo beel ka sii dhigaya in la joojiyo rabshadaha ay dadka baahan dhigayaan.
Howlgalinta 2,500 oo ka tirsan askarta milatariga, si ay u taageeraan booliska Koonfur Afrika ayaan ilaa iyo hada ku guuleysan inay joojiyaan bililiqada baahsan, in kasta oo xaafadda Vosloorus oo ku taal bariga magaalada Johannesburg, ay u muuqato in la xakameeyay.
Ugu yaraan 1,234 qof ayaa laga qabtay magaalooyinka Gauteng iyo KwaZulu-Natal, sida ay masuuliyiintu sheegeen, hayeeshe wali xaajo fara kama qodna. Bililiqada ayaa ka sii socota, waxaana cagta la mariyay Talaadadii xarumo laga dukaameysto ee oo ay ku jiraan Jabulani Mall iyo Dobsonville Mall oo ku yaalla Johannesburg.
Sida uu sheegay maamulaha idaacadda Takalane Nemangowe, waxaa la bililiqesatay Raadiyaha Alex FM, oo u adeegay bulshada Alexandra muddo 27 sano ah, waxaana la qaaday dhamaan agabkii yaallay oo lagu shegay in ka badan ($350,000).
Hadda, Saraakiisha amniga ayaa sheegaya in dowladdu ay ka shaqeyneyso sidii loo soo afjari lahaa rabshadaha iyo bililiqada, taas oo ku faaftay gobolka uu ka soo jeedo Zuma ee KwaZulu-Natal ilaa Johannesburg, oo ah magaalada ugu weyn dalka, iyo gobolka ku xeeran ee Gauteng.
Dadka ku geeriyooday rabshada waxaaa ka mid ah Ganacsato Soomaaliyeed, Dowladda Federaalka ayaana ugu baaqday dhiggeeda Koofur Afrika, in ay xil iska saarto ilaalinta muwaadiniinta Soomaaliyeed kuwaas oo naftooda iyo maalkoodaba ay halis daran wajahaday saddexdii maalin ee na weydaartay.